HS:- Musharaxiin badan oo araajidooda gaarsiiyey baarlamaanka
Posted by admin on April 15 2012 23:11:27
HS:- Musharaxiin badan oo araajidooda gaarsiiyey gudiga doorashada ,halka waftiyo ka socda beesha caalamka nay ku wajahanyahiin..... wararka caawa April,15/2012
HS:- Magaalada Mogdishu ayaa siweyn looga dareemayaa isbedelo dhinaca siyaasada ah tan iyo waxii ka danbeeyey doorashadii ay iclaamiyeen baarlamaanka Soomaaliya. ku dhawaad ilaa iyo 10 musharax ayaa lagu soo waramayaa iney araajidooda gaarsiyeen gudiga doorashada maalmahii tagay.
Mar aanu la xariirnay magaalada Mogdishu oo ah meesha laguwado in lagu qabto doorashada soo socota ayaa waxey dadku kuu sheegayaan in isbedelo siyaasadeed oo muuqda laga dareemayo iyagoona rajo weyn laga qabo in ay bulshada ka xoroobaan dhawaan masuuliyiinta hada jirta ee mustaqbalkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku soo koobay Mahiga iyo roadmap.
Warku waxuu intaas ku darayaa in maalmaha soo socoda ay magaalada Mogdishu gaarayaan waftiyo kala duwan iyo musharaxiin intaba.warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in maanta oo kaliya ay gudiga doorashada gaareen araajidii laga rabay musharaxiinta halka musharaxiin badan ay siyaabo kala duwan ula xariireen gudiga si ay doorashada uga qeybqaataanla la sheegayo.
War hada inaga soo gaaraya dalka Kenyana waxuu sheegayaa in aqiyaartii la baxday saxiixayaasha Garoowe 1 iyo 2 ay ka mid noqonayaan shacabka.inkasta oo Shariif Hasan oo ka mid ahaa lagu dhagan yahay hadane Roadmap iyo dastuur sidaas hada looguma dhiirana ka hadalkooda marka la eego Soomaalida dhexdooda iyo beesha caalamka, inkasta oo ay saxiixayaashii Garoowe 1 iyo 2 ku mashquulsan yahiin sidii ay beelaha Soomaaliyeed oo aan qaarkood laheyn Ugaasyo kadib markii ay geriyoodeen Ugaasyadii lagu yaqiinay iney sameystaan Ugasyo cusub oo deg deg ah si dastuurkaan cusub ee loogu danmeynayo degaano gaar ah oo dalka ka mid ah loo ansaxiyo.
La soco wararkeena danbe iyo doorashada madaxweynimada Soomaaliya.